Faayiloota barruu alergii
Qaaqni Faayiloota barruu alergii dirqaalee alergii faayilootaaf akka qindeessituuf siif eyyama. Yoo deeetaa waraqaa diriiroo akka faayilii "Text CSV" olkeesse fi yoo saanduqni mirkaneessa Qindaa'ina calaltuu gulaaluu qaaqa Akka olkaa'ikeessatti mallattoon itti godhame qaaqni ni mul'ata.
Adda baasaa dirree, adda baasaa barruu fi qindaa'ina kan alergii barruuf qindeessa.
Qindaa'ina arfii alergii barruuf.
Daangessaa dirree fili ykn saagi, dirroota deetaa kan adda baasu.
Daangessaa barruu fili ykn saagi, kan dirree deetaa baay'ee qabatu.
Qabeentoo seelii akka mul'atetti olkaa'i
Durtiidhaan dandeessifame, deetaan akka mul'atutti olkaa'ame, dhangii lakkoofsa fayyade dabalatee. Yoo saanduqni kun mallattoon itti hin godhamne, qabeentoon deetaa tarree ni olk'aama, akka fooyya'ina duraa LibreOffice.ti.
Dhangii lakkoofsa irratti hundaa'uun, qabeentoota seelii gatiiwwan barreefama koo kan yeroo alaagi akka gatiiwwan lakkoofsatti hin hiikamne mul'atu olkaa'uu.
Dalgee tarjaa dhaabbataa
Dirroota deetaa hunda dalgee dhaabbataa wajjin alerguu.
Dalgeen dirree deetaa fayilee barruu alergee keessaa akka dalgee ammee tarjaa walitti dhufootti qindaa'a.
Gatiin dhangii keessatti alergame akka ammeetti seelii keessatti ilaalame.
Yoo gatiin dalgee tarjaa dhaabbataa irra dheerate, akka ### diraatti alergama.
Yoo dirraan barruu dalgee tarjaa dhaabbataa irra dheerate, xumurarratti ni gabaabbata.
Hiriirfama bitaa, Wiirta'aa, fi mirgaa fakkeeffama bakka duuwwaa saaguu dhaan.
Title is: Faayiloota barruu alergii